Warshad CFPx | Shiinaha CFPx Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
100Gb / s CFP2 850nm 100m DDM VCSEL qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyayaasha CFP2 waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo isku xirnaanta 100 Gigabit Ethernet iyo 10x11.2Gb / s Multimode OTN. Waxay u hoggaansamaan qeexitaanka CFP2 MSA iyo IEEE 802.3ba 100GBASE-SR10. Baadhista dhijitaalka ah ayaa laga heli karaa iyada oo loo marayo MDIO. Qalabka wax lagu wareejiyo ee indhaha ayaa waafaqsan shuruudaha RoHS.
100Gb / s CFP4 1310nm 10km DDM LAN-WDM EML qalabka wax lagu beddelo
100Gb / s CFP4 waxaa loogu talagalay 100GBASE Ethernet. Waxay u hoggaansamaan CFP MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE802.3bm CAUI-4 iyo CEI-28G-VSR. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
100Gb / s CFP4 850nm 100m DDM VCSEL qalabka wax lagu wareejiyo